Sida Loo Bilaabo Koontada Maalgelinta Carruurtaada 2022? - Kiiky Maal
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Koontada Maalgelinta Carruurtaada 2022?
Miyaad ka welwelsan tahay oo ma ka welwelsan tahay mustaqbalka iyo xasilloonida maaliyadeed ee carruurtaada? Waxaadna raadinaysay habab aad ku maal gashato mustaqbalkooda oo aad wax walba iyaga ugu saxdo. Markaa waxaad ku taal bogga saxda ah. Sababtoo ah maqaalkan waxaad ku baraneysaa siyaabo aad ku bilaabi karto maalgelinta carruurtaada, oo ay ku jiraan sida loo bilaabo xisaab maalgashi iyaga.
Ma u bilaabi kartaa Sanduuqa Maalgelinta Carruurtaada?
Sidee U Shaqeeyaan Xisaabaadka Xannaanada?
Waa maxay Qorshaha Maalgelinta ugu Wanaagsan/Akoonka Ilmaha/Caruurta?
Koontada Keydka Waxbarashada Coverdell (Coverdell ESA)
Go'aan ka samee nooca koontada aad rabto.
Doorashada Dallaalka ugu Haboon
Sameyso xisaab cusub
Ka caawi ilmahaaga inuu go'aan ka gaaro waxa la maalgelinayo.
Maalgelinta mustaqbalka dhalinyarada
Faqs ku saabsan Sida Loo bilaabo Koontada Maalgelinta ee Carruurtaada?
Immisa jir ayuu ilmahaygu noqonayaa inuu iibsado kayd?
Waa maxay koontada haynta?
Lacag ma kala bixi kartaa akoonnada haynta?
Yaa ku bixiya cashuurta koontada haynta?
Ma u furi kartaa Roth IRA ilmo aan dakhli lahayn?
Maya, maaha macnaha dhaqanka. Maalgelinta maalgelinta wadaagga ah, dhanka kale,, waxaa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo koontada haynta ee lagu sameeyay magaca ilmo aan qaan-gaarin oo ay hoos imanayso kormeerka masuulka.
Waqtigan xaadirka ah, mas'uulka ayaa sii hayn doona koontaroolka akoontada ilaa ilmuhu ka gaarayo qaangaar sharci ah, kaas oo caadi ahaan ah 18 ama 21 jir.
Arag sidoo kale: Sidee Loo Bixiyaa Realtors 2022? Khiyaamada Maalgashiga
Iyadoo sharciyada maamula xisaabaadka haynta ay ka duwanaan karaan hal gobol ilaa kan xiga, dhab ahaantii waa isku mid guud ahaan guddiga.
Inta badan, xisaabaadka carruurta aan qaan-gaarin waxaa lagu dhisaa sida ay dhigayso mid ka mid ah Xeerka Gifts to Uniform Gifts to Childs Act (UGMA) ama Xeerka u wareejinta da'da yar (UTMA), labaduba waxay xukumaan sida loo maareeyo koontada ilmaha yar.
Inta badan gobolada waxay bixiyaan xisaabaadka UTMA, kaas oo loo isticmaali karo in lagu badbaadiyo lacagta canshuurta. Xisaabaadka maalgelinta wadaagga ah ee UTMA, $950 ee ugu horreeya ee dakhligu kuma xidhna cashuur.
Dakhliga ka soo gala $950 ee dakhliga soo socda waxa lagu cashuuraa heerka cashuurta yar ee ilmaha; dakhliga ka soo gala dakhli sanadeedka ka badan $1,900 waxa lagu cashuuraa heerka cashuurta yar ee waalidka.
Doorashooyin kale oo maalgashi, marka lagu daro lacagaha wadaagga ah, ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo xisaabaadka UGMA ama UTMA si ay gacan uga geysato kala-duwanaanshaha galka macmiilka.
Marka xisaabaadkaas la sameeyo, waxaa loo arkaa inaan laga noqon karin. Xisaabiyeyaasha xisaabaadka waxay awood u leeyihiin inay doortaan maalgelinta wadaagga ah oo ay isbeddel ku sameeyaan maalgashiga, laakiin wixii lacag ama hanti ah oo lagu deeqay lama soo celin karo.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo dadka masuulka ah ay badi yihiin waalid, qof kasta ayaa loo magacaabi karaa inuu kormeero lacagta.
Xisaabaadka haynta laguma xaddido dakhliga, qof kastaa wax ku biirin karaa akoontada wakhti kasta iyada oo aan la xaddidin.
Kadib markuu gaaro da'da qaan-gaarka, ilmuhu wuxuu xor u yahay inuu ka faa'ideysto akoontada sabab kasta oo uu doorto. Akoonada UGMA ama UTMA waxaa inta badan isticmaala qoysasku si ay ugu bixiyaan kharashaadka kulliyadaha.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah hantida waxaa lagu haystaa magaca ilmaha, waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato u-qalmitaanka ubadka ee kaalmada dhaqaale ama xaddido cadadka gargaarka ee cunuga helo.
Hoos waxaa yaal koontada maalgashiga ee carruurta.
Kuwani waa xisaabo lagu aaminay qof kale.
Waxaad u samayn kartaa xisaabaadka haynta ee carruurta yaryar iyo kuwa ay awow u yihiin ee hoos yimaada Xeerka Hadiyadaha Labbiska ah ee Carruurta Yaryar (UGMA) iyo Xeerka U beddelashada Da'da yar (UTMA), labadaba waxaa loo tixraacaa xisaabaadka hayn.
Maadaama aad tahay ilaaliyaha akoontada ama wakiilka, waxaad sii haysaa maamulka akoontiga ilaa ilmahaagu ka gaaro qaangaar, kaas oo inta badan u dhexeeya da'da 18 iyo 21.
Marka ilmahaagu gaadho da'da qaan-gaarka, waxay noqonayaan mulkiilaha sharciga ah akoonkooda gaarka ah waxayna xor u yihiin inay ku sameeyaan dhaqaalaha waxay jecel yihiin.
Tani waxay ka dhigan tahay in shakhsiyaadka ay xor u yihiin inay ku bixiyaan lacagta waxay rabaan.
Arag sidoo kale: Waa maxay cashuurta dakhliga maalgalinta ee saafiga ah? Dulmar iyo Sida ay u shaqeyso
Meel u dhig lacag kulliyadda iyo kharashyada kale ee waxbarasho ee aqoonta leh ee aan la cashuurin.
529 qorshayaal waa qorshayaal maalgashi oo faa'iido leh oo cashuureed oo u oggolaanaya qoysaska inay kaydiyaan kharashyada hadda iyo mustaqbalka ee dugsi-dhigista ee ka-faa'iideystayaasha iyagoo ka faa'iideysanaya daaweynta habboon ee canshuurta.
Dhaqan ahaan, qorshayaashan waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in lagu daboolo kharashaadka waxbarasho ee u qalma ee ardayda kuleejka ah, laakiin dib u habaynta cashuuraha ee la ansixiyay 2018 ayaa balaarisay baaxada si loogu daro kharashaadka xaqa u leh ardayda fasalada K-12 sidoo kale.
Markaad tixgelinayso mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu maalgeliyo $1,000 ama ka badan sannadkii cunugga, qorshaha kaydinta 529 waa in la tixgeliyaa.
Kuwaani waxay siin karaan kaalmo dhaqaale ubadkaaga halka ay sidoo kale yareynayaan masuuliyada canshuurtaada haddii aad go'aansato inaad baabi'iso maalgelinta lagu hayo akoontiga.
Qadarka lacagta adiga iyo kuwa kale aad ku biirin kartaan Qorshaha 529 ee ilmaha waxa xadiday shuruudaha qorshaha. Qaaraanka waxa la sameeyaa cashuurta ka dib, taas oo macnaheedu yahay inaadan awoodin inaad u dalbato cashuur dhimis iyaga.
Tani waa mid ka mid ah koontada maalgashiga ee carruurta.
Labada dhaqan iyo Roth, waa la heli karaa.
Maalgelinta sida sinnaanta, lacagaha sarrifka-ganacsiga ah (ETFs), curaarta, iyo noocyada kale ee hantida waxaa lagu hayaa Koontada Hawlgabka Shakhsi ahaaneed (IRA), taas oo ah akoon kayd ah oo faa'iido leh oo canshuur ah.
Akoonadan waxaa inta badan furta da'yarta qaangaarka ah sababtoo ah waxay u baahan yihiin qofka akoontada haysta inuu dakhli kasbaday si uu akoon u furo.
Si kastaba ha noqotee, haddii ilmahaagu bilaabo inuu helo dakhli caadi ah, waxaa laga yaabaa inay u fiicnaato inay sameeyaan IRA ilaalin ah si ay u baraan maaraynta lacagta mas'uulka ah iyo maalgashiga waxtarka leh ee cashuurta.
Markaa waxa laga yaabaa inaad ka caawiso carruurtaada inay doortaan hantida ugu faa'iidada badan ee ku kobcaysa faa'iidooyinka cashuurta laga bilaabo wakhtiga ay carruurta yaryar yihiin iyo ilaa qaan-gaarnimadooda.
Koontada Kaydka Waxbarashada ee Coverdell (CESA) waxay noqon kartaa qalab faa'iido leh oo lagu kaydiyo kharashyada kulliyadda.
Coverdell ESAs, sida qorshayaasha 529 ee kor lagu soo sheegay, waa mid ka mid ah ikhtiyaarada maalgashiga kaydinta dugsiga ee ugu caansan sababtoo ah daaweynta cashuurta dakhliga federaalka ee wanaagsan ee ay helaan.
Marka laga soo tago khidmadaha kuleejka, xisaabaadkani waxay kuu oggolaanayaan inaad lacag ku biiriso kharashaadka waxbarashada ee dugsiyada fasalka K-12.
Intaa waxaa dheer, si la mid ah sharciyada xukuma 529 Qorshayaasha, haddii aad ka faa'iidaysato dhaqaalaha qorshaha ESA si aad u bixiso kharashyada aan u qalmin, waxaad mutaysan doontaa 10 boqolkiiba ganaax.
Intaa waxaa dheer, waxaad mas'uul ka noqon doontaa canshuurta faa'iidada raasumaalka faa'iidooyin kasta oo lagu aqoonsaday akoontada wakhtiga wax kala iibsiga.
Arag sidoo kale: Maalgelinta CD: imisa ayaad kasban kartaa?
Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee maalgashiga lagu guuleysto ayaa ah in la helo aragti dheer, taas oo carruurtu ay haystaan ​​​​fara badan.
Haddii ay diyaar u yihiin inay lacagtooda u oggolaadaan inay ku fadhiistaan ​​akoon maalgashi dhowr sano, waxay u badan tahay inay arki doonaan soo laabasho weyn oo ku saabsan maalgashigoodii ugu horreeyay.
Ogaanshaha inay arkayaan kobaca lacagtooda waxay ku dhiirigelin kartaa inay noqdaan kuwa wax badbaadiya iyo maalgashadayaasha sida dadka waaweyn, marka ay muhiim tahay.
Waa kuwan waxyaabo ay tahay in laga fekero marka la maalgashanayo carruurta, oo ay ku jiraan hantida ugu fiican iyo sida loo doorto oo loo dejiyo akoontada dilaaliinta ee ugu horreysa ee ilmahaaga, iyo sidoo kale xoogaa agab ah.
Koontada noocaan ah waxaa sidoo kale loo tixraacaa koontada UGMA/UTMA, kaas oo kaa caawin doona inaad nadiifiso jahawareer kasta oo ku saabsan waxaad arkayso.
Si carruurtaadu u xiisayn karaan inay maalgashadaan, waxaad u baahan tahay marka hore inaad go'aamiso nooca koontada maalgashiga ee iyaga ugu faa'iidada badan.
Go'aankaas waxaa si weyn u saameeya in ay dakhli heleen iyo in kale.
1. Haddii ilmahaagu aanu lahayn dakhli ama mushahar la cashuuri karo, waxaad dalban kartaa waxyaabaha soo socda:
Waxaad u furi kartaa koontooyinka dalaalnimada carruurtaada iyadoo la raacayo tusmooyinka Sharciga Gift to Unvers Act ama Xeerka u wareejinta da'da yar (UGMA/UTMA).
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Macnaha Maalku? | 10 Xaqiiqooyin ku saabsan Dhisidda Maalka
Ilmahaaga waxa loo ogolaan doonaa in uu si buuxda u maamulo akoonkiisa ka dib marka uu gaadho da'da 18 ama 21, taas oo ku xidhan qawaaniinta gobolka ee ay ku nool yihiin, xataa haddii koontada marka hore lagu hayo magacaaga.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xisaabaadka UTMA iyo UGMA.
Arag sidoo kale: Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
2. Haddii ilmahaagu leeyahay dakhli ama dakhli la cashuuri karo, waa inaad samaysaa waxyaabaha soo socda:
Carruurtaada, haddii ay da' weyn yihiin oo ay leeyihiin il dhaqaale, waxay ka faa'iidaysan karaan kaalmadaada furitaanka IRA xannaanaynta. Roth IRA, gaar ahaan, waa doorasho aad u fiican carruurta:
Wax ku darsiga uu ilmahaagu u sameeyo akoontada waxay u kori doontaa cashuur la'aan marka koontada qaangaadho.
Qaaraankaas wakhti kasta waa lala noqon karaa, faa'iidada maalgashiga waxa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan, oo ay ku jiraan hawlgab, Iibsiga ugu horreeya ee guriga, iyo kharashyada waxbarashada. (Ka eeg boggan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Roth IRAs ee carruurta.)
Dillaaliintu waxay sidoo kale horumarinayaan noocyo xisaabeed cusub oo si gaar ah loogu talagalay baahiyaha dhalinyarada.
Waxyaabaha cusub ee dhowaan la sameeyay waxaa ka mid ah Fidelity's Youth Account, kaas oo u ogolaanaya carruurta da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 17 jir in ay maamulaan xisaabaadkooda iyada oo u oggolaanaysa waalidiinta in ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda, ganacsigooda, iyo wax kala iibsiga, oo ay ku dhammaystiran yihiin digniino.
Xisaabaadka maalgashiga dhalinyarada, oo ka soo horjeeda xisaabaadka haynta, waa nooc cusub oo akoon ah oo ay dhalinyaradu tixgeliso.
Si kasta oo ay ahaataba nooca akoontada dilaaliinta ee aad go'aansatid inaad u furto carruurtaada, waxaad u baahan doontaa inaad ku bilowdo inaad hesho dallaal ku caawiya.
Koontada maalgashiga ugu fiican ee caruurtu kama dalacaan khidmadaha akoontiga umana baahna deebaaji bilowga ah oo weyn. Tani waxay siinaysaa carruurtaada fursad ay ku bilaabaan maalgelinta lacag yar.
"Raadi dullaal online ah oo aan wax lacag ah ka qaadin koontada oo aan u baahnayn maalgelin ugu yar."
Tixgeli khidmadaha ku lug leh maalgashiga uu ilmahaagu doonayo inuu sidoo kale sameeyo.
Tixgeli tusaalahan soo socda: Haddii ilmahaagu rabo inuu barto sida loo ganacsado saamiyada, waa inaad raadisaa dilaal ka qaada lacag yar ama lacag la'aan.
Haddii carruurtaadu ay rabaan oo kaliya in lacagtoodu ay ku koraan hab gacan-ka-bax ah, raadi dallaaliyeyaal leh tiro badan oo miisaaniyad tusmaysa qiimo jaban.
Haddii aad raadinayso akoon dilaal oo aad u isticmaasho si aad u barato carruurtaada wax ku saabsan maalgashiga, waa inaad la socotaa in dilaaliinta badani ay bixiyaan waxyaabo waxbarasho, sida casharrada maalgashiga internetka iyo xitaa ku celcelinta xisaabaadka ganacsiga ee macaamiishooda.
Arag sidoo kale: Waa maxay Soo celinta Maalgelinta (ROI)?
U furista koontada haynta ee ilmahaaga - ama akoon dillaalnimo oo caadi ah ama shakhsi Roth xisaabaadka hawlgabka - waxaa lagu dhammeeyaa 15 daqiiqo gudahood; Inta badan dilaaliinta, waxaad ku dhammayn kartaa habka gebi ahaanba online.
Hubi inaad gacanta ku hayso dhammaan macluumaadka khuseeya si aad u dedejiso hawsha. Adiga iyo ilmahaaga Lambarada Bulshada, iyo sidoo kale taariikhaha dhalashada iyo macluumaadka xiriirka, waxaa hubaal ah in uu codsan doono dullaalku.
Waxaa hubaal ah in lagaa rabo inaad bixiso macluumaadka ku saabsan shaqadaada, waana inaad u diyaargarowdaa inaad ku xidho bangi kale ama akoon dillaal ah si aad lacag ugu xawisho si aad u maalgeliso akoontiga cusub.
Marka koontada haynta la sameeyo oo la maalgeliyo, madadaalada dhabta ahi waxay bilaabataa: in lacagta laguugu shaqeeyo.
Carruurtaadu waxay awood u yeelan doonaan inay maalgashadaan kaydka gaarka ah, iyo sidoo kale maalgelinta wadaagga ah, miisaaniyada index-ka, iyo lacagaha la isweydaarsado, iyaga oo isticmaalaya xisaabta dilaalnimada, haddii ay sidaas doortaan.
Haddii aad rabto in aad ka farxiso carruurtaada maalgashiga, waxaan kugula talineynaa inaad qaadato hab laba waji leh:
Ka caawi inay doortaan hal ama laba kayd oo gaar ah. U fiirso magacyada reerka ee ay horeba u yaqaaneen - lahaanshaha xitaa boqolkiiba yar ee noocyada caanka ah ee ay aqoonsadaan waxay ka dhigi doontaa kuwo ku xamaasad leh maalgashiga mustaqbalka.
Maalgelinta Tusaha waa in loo adeegsadaa dhisidda inta ka hartay faylalka. Marka ilmahaagu sii wado inuu lacag ugu biiriyo akoonkiisa ama keeda maalgalinta, waxaanu ku boorinaynaa isaga ama iyadu inay ka waantoobaan iibsashada saamiyo kale oo saamiyo gaar ah taa beddelkeedana ay maalgashadaan miisaaniyadaha qiimaha jaban ama sanduuqa sarrifka-ganacsiga (ETFs). Sababtoo ah xaqiiqda ah in lacagahan ay kooxeeyaan boqollaal saamile oo wadajira hal maalgashi, waxay bixiyaan kala-duwanaanshaha aadka loogu baahan yahay faylalka. Ilmahaagu waxa uu awood u yeelan doonaa in uu sidan oo kale u maalgeliyo shirkado kala duwan oo kala duwan hal wax kala beddelasho.
XIDHIIDHKA: Xisaabta Kaydka Ganacsi ee ugu Sareeya ee 10 ee ugu Sareeya 2022
Haddi ubadkaagu wax ka weydiiyo wax ku saabsan maalgashiga, koontada haynta ayaa sii ahaan doonta meesha ugu fiican ee aad ka bilaabi karto raadintaada.
Da'da ugu yar ee lagu furayo akoon dillaal ah oo leh badi abka maalgashiga caanka ah waa 18 jir (iyo mararka qaarkood ka weyn, iyadoo ku xidhan gobolka.)
Markaa, wakhtigan xaadirka ah, adiga ayaa leh go'aanka kama dambaysta ah ee sida iyo meesha ay lacagtooda u galinayaan.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah abka maalgashiga ee ugu caansan jiilalka da'da yar (sida Robinhood iyo Webull) ma bixiyaan xisaabaadka ilaalinta.
Markaa waxaad u baahan doontaa inaad cilmi-baadhistaada la barbar dhigto dhallintaada, adigoo sharxaya in haddii ay rabaan inay bilaabaan maalgashiga ka hor da'da 18, waa inay ku sameeyaan iyada oo loo marayo machad bixisa xisaabaadka ilaalinta.
Markay da'doodu gaadhaan, waxay go'aansan karaan inay rabaan inay ku sii wataan adeeg dillaalnimo oo isku mid ah, ama ay iyagu furaan.
Arag sidoo kale: Sida Loo Iibsado Dhul-Beereedka Maalgelinta 2022| Hagaha Khabiirka
Maalgelinta mustaqbalka carruurtaada waa hawl faa'iido leh oo faa'iido leh. Waxaad u isticmaali kartaa kaydka si aad u baro carruurtaada casharro ku saabsan qiimaha waxsoosaarka, muhiimada maalgashiga iyo xirfadaha maamulka lacagta guud.
Ku xidhidhkooda maalgashiga waxa laga yaabaa inay u baahdaan in la taabto qaybaha kale ee noloshooda si ay u bilaabaan dhisitaanka xiisaha muddo ka dib.
Maxaad u caawin weyday carruurtaada adigoo caawinaya noloshooda dhaqaale! Wax ka baro akoontada maalgashiga ee carruurta
FAQs Sida loo bilaabo Koontada Maalgelinta ee Carruurtaada?
Si aad u bilowdo maalgelinta saamiyada iyaga u gaar ah, ilmahaagu wuxuu u baahan doonaa xisaab dillaal, waana inay ahaadaan ugu yaraan 18 jir si ay mid u furaan.
Waxay bilaabi karaan ka hor intan, laakiin waxay u baahan doonaan waalid ama mas'uul inay u furaan xisaab ilaalin.
Haddii aad lacag kala baxayso koontada haynta, waa in loo isticmaalo danta ilmaha aan qaan-gaarin akoonka si aad isaga bixiso kharashyadaada.
Sidoo kale, wax ku biirinta koontada haynta waa waddo hal dhinac ah; dib uma soo celin kartid wixii hanti ah ee lagu hayo koontada haynta marka aad siiso ilmaha yar.
Koontada iyo hantideeda waxaa iska leh ilmaha si walba, xitaa haddii aad tahay qofka maamulaya.
Iyadoo la tixgelinayo koontada waxaa iska leh ilmaha, farsamo ahaan, waxay yihiin canshuuraha ilmaha yar si ay u bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan, $1,100 ee ugu horreeya ee dakhliga aan la kasban (sida saami qaybsiga, ribada ama dakhliga ka soo gala akoontada) waa cashuur la'aan. Intaa ka dib, $1,100 ee soo socda ee dakhliga aan la kasban waxaa lagu canshuuraa heerka ubadka. Marka ilmaha aan qaan-gaarin dakhligiisa uu ka sarreeyo $2,200, waxaa lagu canshuuri doonaa heerka canshuurta waalidka
Ma jiraan xayiraad da'da Carruurta da' kasta ah waxay wax ku biirin karaan Roth IRA, ilaa iyo inta ay dakhli kasbadeen. Waalidka ama qof kale oo weyn ayaa u baahan doona inay u furaan ilaalinta Roth IRA ee ilmaha.
Sida Looga Faa'iidaysto Sicir Bararka: Fursadaha Maalgashiga
QORSHE MAALIYEED VS LATALIYAHA MAALIYADA: WAA MAXAY Farqiga 2022?
Warshadaha cryptocurrency ayaa si aad ah u koray tan iyo markii Satoshi Nakamoto uu daabacay waraaqdii asalka ahayd ee Bitcoin sanadkii 2008. In ka badan…
Sida Loo Maalgeliyo Suuqa Beerka Sanadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Tallaabo-fudud ah oo Fudud
Ma jiraan wax u dhib badan sida markaad isku deyeysid inaad ka heshid agagaarka suuqa orso. Sida…
20 Blogyada Maalgashiga Ugu Fiican Sanadka 2022
Kahor intaadan gelin maalgashiga, waxaad u baahan tahay inaad waxbadan ka ogaato maalgashiga. Si kastaba ha noqotee, ma aha wax uun uun…
Waa maxay Koontada Dallaalka Wadajirka ah? Ma inaad mid leedahay?
Koontada Dallaalka Wadajirka ah waxaa loo isticmaali karaa maalgashi, in kastoo, dad badan ay isticmaalaan…